Izay poritra, mivoaka… | NewsMada
Izay poritra, mivoaka…
Lalaon-daomy ny resaka: tsy misy te hamoaka vaovao, saingy rehefa voatery, tsy afaka mitelim-bato ny mpilalao. “Izay poritra, tsy maintsy mivoaka”, hoy tokoa ny mpilalao daomy. Fitenenana marina hatraiza hatraiza, ary na oviana na oviana tokoa izany.
Poritra ny fanjakana? Angamba eny matoa nivoaka ihany ny vahaolana. Azo natao ihany ny filankevitry ny governemanta manokana, nandinihana ny toe-draharaham-pirenena manery mafy ny Malagasy amin’izao fotoana izao. Efa nandindona ny fipoahana, efa akaiky ho tampina ny daomy…
Tsy fandresena ho an’ny mpitatitra akory, fa pi-maso ho an’ny vahoaka ny fandraisana fepetra haingana. Hay ve azo natao ihany e? Hay misy vahaolana azo raisina ihany rehefa poritra? Isaorana azy ireo aloha nandray fepetra, ka tsy hisondrotra indray izany ny saran-dalana. Na kely am-panononana aza noho ny fidangan’ny vidim-piainana, goavambe amin’ny paosy hivoahany ilay ariary zato sondro-bidin’ny saran-dalana nanangasanga teo.
Koa satria poritra ka nivoaka vaovao, tokony hivonona ihany koa amin’ny valim-panafihan’ny mpifanandrina. Voaresaka avokoa ny fiakaran’ny vidim-bary, ny vidin-tsolika, sns, satria tsy ny saran-dalana ihany ny andavanandron’ny Malagasy. Ny delestazy, tsy misy te hiresaka intsony…
Hanao ahoana ny ho tohin’ny lalao? Ho tampina ny daomy? Iza no miala? Iza no hahazo isa maro? Misy mandeha irery sa misy manaraka ihany? Mifandanja ny lalao sa kosa misy mitelim-bato? Fanontaniana maro mahaliana ny mpijery sy ny mpilalao izany. Indrindra ny hoe: “iza no manampina?” sy ny “iza no miala?”